Home News Xildhibaan Mahad Salaad oo Dowlada ku Eedeeyay in ay Dhiiranaan siisay Al-shabaab...
Xildhibaan Mahad Salaad oo Dowlada ku Eedeeyay in ay Dhiiranaan siisay Al-shabaab si ay Muuqaalo u Duubaan Goorta ay Dadka Dilayaan!!
Iyadoo al-shabaab ay baahiyeen muuqaalo ay ka duubeen dad ay dileen ayaa waxaa arinkaasi ka hadlay Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad,waxaa uu sheegay in aysan sidaan u dhiiranaan jirin Al-shabaab.
Dowladda soomaaliya ayuu ka codsaday in ay baaritaan dheer ku sameeyso Falalkaan aadka looga naxay ee muqdisho ka dhacay,Qoraal uu soo dhigay Bartiisa facebook-ga ayaa u qornaa sidaan
………………………………………………………………………………………………………………Alshabaab dalka waa joogi jireen waxna waa dili jireen, sidaana uma dhiiranaan jirin ee “MASHRUUCAAN AAN DILEE I DUUB” cidda iska leh Dowladu ha baarto!
Waxaan caawa daawaday muuqaalo argagax leh oo ururka Alshabaab ku baahiyeen Baraha Bulshada. Muuqaaladaas oo ay duubeen iyaga oo dilaya dad isugu jira Shacab iyo Saraakiil Dowladeed.
Alshabaab dalka waa joogi jireen waxna waa dili jireen, lkn waxaa caawa dareenkayga kiciyay, una baahan runtii in la dul istaago lana baaro ayaa ah:
1. Dilalka waxaa la geysanayaa maalin cad, goobo bartamaha magaalada ah oo waliba inta badan ay fadhiyaan ama joogaan dad badani!
2. Qofka inta aan la dilin kahor muuqaalkiisa si buuxda ayaa loo duubayaa!
3. Qofka wax dilaya meel aan ka yara fogeyn qofka la dilayo ayuu kasoo dhaqaaqayaa, inta uu soo socdana saanqaadkiisa, bistoolada uu wax ku dilayo iyo xabadaha uu ridayo dhamaan waa la duubayaa!
4. Inta qofka xabadaha lala dhacayo, inta uu ka dhacayo, ilaa naftu ay ka baxdo qadar kooban ayay dul taagnaanayaan meydkiisa iyaga oo duubaya!
5. Qofka wax duubaya iyo midka wax dilaya in kastoo wajiyadooda aysan muuqan hadana wax cabsi ah kama muuqato qaabka ay dilalka u fulinayaan iyo muuqaalada ay duubayaan intaba. Taas oo micnaheedu yahay in ay jiri karaan ilaalo kale oo amnigooda sugeysa oo aan ahayn qofka wax dilaya iyo midka wax duubaya!
Sidaas daraadeed, waxaan ugu baaqaynaa Xukuumada in arintaan si deg deg ah u baarto, tilaabo cadna ka qaado, iyo sidoo kale in ay dib ugu laabato qaabka loo maareynayo amniga magaalada Mogadishu iyo ciidamada la sheegay in ay sugayaan amniga Gobolka Banaadir.